यो बोल्ने खालको ‘सेक्स डल’, जसले तपाइलाई मज्जाले यौन सन्तुष्टि दिन सक्छ ! « Naya Bato
यो बोल्ने खालको ‘सेक्स डल’, जसले तपाइलाई मज्जाले यौन सन्तुष्टि दिन सक्छ !
जेठ २ – हर्मनी एक नयाँ प्रकारको ‘सेक्स डल’ हो जुन हिँड्न सक्छ र कुराकानी पनि गर्न सक्छ । यसको टाउको, आँखा र ओठ पूर्ण रुपमा तयार छैनन् र यसको कुराकानी पनि सिमित छ । तर यो नयाँ रोबोटिक्स क्रान्तिको हिस्सा हो जसको मानवसँग ठ्याक्कै मेल खाने शरिर र कृत्रिम दिमाग पनि छ ।
केही मानिसहरुको मान्यता अनुसार यो मानिसको रोबोटसँग कुराकानी गर्ने दिशामा क्रान्तिकारी कदम हो जबकी केही मानिसहरुले भने यसलाई रोबोट विकासको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन बताइरहेका छन् । जति हामी मानव रुपको प्रतिरुपको करिब जान्छौं त्यति नै हामी त्यसको रचनासँग डराउँछौं भन्ने कुराहरु सार्वजिक भइरहेका छन् । यो कुरा क्यालिफोर्नियाको स्यान मार्कोसको एक फ्याक्ट्रीमा वास्तविक भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
यहाँको रिसेप्सनमा बिजनेस सूट लगाएका दुई मानवजस्ता देखिने रोबोट आगन्तुकहरुको स्वागतमा राखिएका छन् । यहाँको लबीको ढोका निकै राम्रो काठको पोस्टरले भरिएका छन् । यसलाई निकै ध्यान दिएर हेर्दा मात्र यो रोबोट भएको थाहा हुन्छ । वास्तविक ‘डल’ बनाउने एबिस क्रिएशनका प्रमुख म्याट म्याकमुलेन ‘आर्ट एण्ड स्कल्पचर’ को पृष्ठभूमिका हुन् ।
कुराकानी गर्ने यो डलको बारेमा म्याकमलन भन्छन्, ‘थुप्रै मानिसहरु यो वास्तविक डललाई यसकारण खरिद गर्न सक्छन् किनभने यसले महसुस गराउँछ कि यो सेक्स खेलौनाभन्दा धेरै यौन सक्षम छ ।’ उनी भन्छन्, ‘यसले घरमा एक व्यक्तिको उपस्थिती महसुस गराउँछ । एआई (एप) मानिसहरुलाई आफ्नो डलको व्यक्तित्व बनाउने उपकरण दिन्छ ।’
यो एक एपमार्फत गरिन्छ जसलाई डलसँगै वा स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले स्मार्टफोनमा भर्चुअल व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिने एपजस्तै काम गर्दछ । उपभोक्तासँग डलका लागि थुप्रै व्यक्तित्वको विकल्प हुन्छ जस्तैः मुडी, रिसाहा वा प्रेमको विकल्प । म्याकलनले हर्मनीका लागि इष्र्याको विकल्प छाने र त्यसको डलको ‘ती महिलालाई फेसबुकबाट हटाउ’ भन्ने प्रतिक्रिया दियो ।
यो डल यस वर्षको अन्त्यसम्म खरिदका लागि उपलब्ध हुनेछ र यसका दुई संस्करण हुनेछन् । एउटा भर्सनले अनुहारको पहिचान गर्नसक्छ जसको मूल्य १० हजार डलर हुनेछ भने अर्को सस्तो भर्सन ५ हजार डलरको हुनेछ जसमा अनुहारको पहिचान गर्न सक्दैन । अहिले यो फ्याक्ट्रीले संसारभरीको ग्राहकका लागि डल बनाउँछ जसमा धेरैजसो पुरुष हुन्छन् । यद्यपी, यसको दाबी अनुसार उनीहरुसँग केही महिला ग्राहक पनि छन् ।
सबै डल सुन्दरताको परिभाषाको अनुरुष छ । यसको फिगर बार्बीको जस्तो छ ।म्याकमुलेनका अनुसार डलको डिजाइन ग्राहकले भने बमोजिम हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘हामी व्यापार गरिरहेका छौं र धेरैजसो हाम्रा ग्राहकको विशेष माग हुन्छन् । दुर्भाग्यको कुरा यो छ कि यीमध्ये सायद कुनै पनि आदर्शका रुपमा हुन्छन् ।’
म्याकमुलेन आफैं पनि आफ्ना लागि सेक्स डल राख्दैनन् । उनका श्रीमती र बच्चा छन् । एरिजोनाका मार्क योंगसँग माय लिन नामकी सेक्स डल छ । उनले केही समय पहिले एआई एपको बारेमा जानकारी लिए तर उनी दुई सेक्स डललाई एक गर्ने योजनामा छैनन् । मार्क भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ कि एपले त्यसलाई नयाँ जिन्दगी त दिनसक्छ तर एपमा डलको आफ्नो एक व्यक्तित्व छ जो माय लिनको त्यो छवीसँग अलग छ जुन मेरो दिमागमा छ । यस्तो अवस्थामा मैले दुईवटा सम्बन्भ निभाएको जस्तो हुनेछ ।’
क्याथलिनले केही वर्ष पहिले सेक्स रोबोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका लागि एक अभियान चलाएका थिए र त्यतिबेला नै सेक्स डल एक समस्या नभई मुद्दा सेक्स प्रतिको व्यवहार र एक–अर्काबारे भएको स्पष्ट गरिएको थियो ।उनी नयाँ एआई सक्षम सेक्स डललाई खारेज गर्छिन् ।
६०० करोडका फिल्ममा सलमान, शाहरूख र आमिरको बलिउड धमाका, कस्ले कति कमाउला ?
औषधि बोकेरै उड्यो महाविर पुनको ड्रोन